कहिल्यै नसुत्नुहोस् यी ४ पोजीसनमा, पेटमा पर्न सक्छ असर – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / कहिल्यै नसुत्नुहोस् यी ४ पोजीसनमा, पेटमा पर्न सक्छ असर
admin October 31, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 187 Views
यो त तपाई सबैलाई थाहा नै होला, हामी ४ पोजीसनमा सुत्ने गर्छौ। जुन हो एउटा दायाँ तर्फ, बायाँ तर्फ,सिँधा र उल्टो। हामी सबै यस्तै पोजीसनमा सुत्ने गछौँ । तपाईले देख्नुभएकै होला, जब हामी सुत्छौँ, सुत्दा सुत्दा डराउँछौँ। या कुनै अनौँठो सपना देखेर सुत्न सक्दैनौ। कैँयौ चोटी पोजीसन नमिल्दा बिरामी पनि बनाइदिन्छ। तपाईको सुत्ने पोजीसन गलत हुनुका कारण तपाई बिरामी हुनुभएको महशुस गर्नुहुन्छ। आज हामी केही पोजिसका बारेमा जानकारी दिदैछौँ।
१) यदि तपाई खाना खाएपछि सुत्ने तरखरमा हुनुहुन्छ भने बायाँ तर्फमा मुख गरेर सुत्नुहोला । यसले तपाईको शरीरमा भएको खानालाई ढिलो ढिलो गरी पचाउँदछ । यसो गर्नाले तपाईको शरीरको तापमान सहि रहन्छ । किनकी शरीरको बायाँ तर्फमा पाचन तन्त्र हुन्छ र हृदय पनि शरीरको बायाँ तर्फमा नै हुन्छ। तर यदि तपाई यसको विपरीत दायाँ तर्फमा सुत्नुहुन्छ भने तब तपाईले खाएको खाना छिटै छिटै पाचन हुन थाल्छ । जुन स्वास्थ्यको लागी हदभन्दा बढि नोक्सानदायक साबित हुन्छ ।
२) हामीले सुत्ने समयमा सिरानी राखेर सिँधा सुत्नु हुँदैन । किनकी यसो गर्नाले मेरुदण्डको हड्डिमा ठुलो समस्या पर्न सक्छ । यदि तपाईलाई सिरानी राखेर सुत्नै पर्छ भने बायाँ तर्फ मुख फर्काएर सुत्नुहोला । यसो गर्नाले तपाईको मेरुदण्डको हड्डि सँधै सिधाँ रहन्छ ।
३) ध्यान दिनुहोस् कहिले पनि व्यक्ति पेटमा निर्भर भएर सुत्नुहुँदैन । यसो गर्नाले शरीरलाई सबैभन्दा बढी नोक्सान हुन्छ । र पेटमा निर्भर भएर सुत्नाले अर्थात् उल्टो सुत्नाले शरीरमा धेरै तौल पर्दछ। जसले हृदय सम्बन्धि बिमारी हुने समस्या पनि सँधै बनिरहन्छ। यतीमात्रै होइन एक अनुसन्धानमा यो पनि भनिएको थियो कि सबैभन्दा खतरनाक पोजीसन पेटको बलमा सुत्नु अर्थात् वा उल्टो सुत्नु हो।
४) एक अनुसन्धानमा यो पत्ता लगाइएको थियो कि दुनियाभरमा करिब ७५ प्रतिशत मानिस घुँडा खुम्चाएर सुत्ने गर्दछन् । जसले घुडाँको जोइन्ट पोइन्टमा नराम्रो असर पर्दछ । यसरी सुत्नाले तपाईलाई थकाइ दुखाइ उत्पन्न हुनसक्छ। जसको घुँडा खुम्चाएर सुत्ने बानी हटेकै छैन, त्यस्ता व्यक्तिले दुबै घुँडाको बीचमा सिरानी राखेर सुत्नुहोला । यदि तपाई स्वस्थ र राम्रो निद्रा लिन चाहनुहुन्छ भने यी पोजीसनहरुमा सुत्नु आवश्यक छ।
Previous भोलि कार्तिक १५ गते सोमबार : अशुभ-शुभ कस्तो रहला? हेर्नुहोस भोलिको राशिफल!
Next नेपाली फुटबल टिमका लोकपि्रय प्रशिक्षक अलमुताइरीको कति छ सम्पति ?